Kooxda Juventus oo Bareejo La Gashay Kooxda Cesena – Radio Muqdisho
Kooxda Cesena ayaa garoonkeeda Dino Manuzzi bareejo 2-2 ah kula gashay kooxda Juventus oo hogaamineyso horyaalka talyaaniga.
Kooxda Juventus ayaa ka faa’ideysan waysay bareejadii ay galabta gashay kooxda Roma,waxana ay iska beer dareeysay fursad ay ku sii kordhin laheyd dhibcaha ay ku hogaamineyso horyaalka talyaaniga.
Kooxda Cesena ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 17-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Milan Djuric.
Kooxda Juventus ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay labo gool oo deg deg ah,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Alvaro Morata iyo Claudio Marchisio,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Franco Brienza ayaa daqiiqadii 70-aad ee ciyaarta goolka labaad ee bareejada u dhaliyay kooxda Cesena.
Ciyaaryahan Arturo Vidal ayaa kooxda Juventus ka qasaariyay rigoore ku badin lahayd.
Kooxda Juventus ayaa horyaalka talyaaniga ku hogaamineyso 54-dhibcood,halka kooxda Cesena ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka talyaaniga ugu hooseeya.
Wasiirada Duulista Hawada iyo Macdanta oo xilalkooda la wareegay “SAWIRRO”